Ogaden News Agency (ONA) – Boqolaal loo taxabay xabsiyada Jigjiga xagee lageeyey,yaase kamid ah dadkaa la xidhay?
Boqolaal loo taxabay xabsiyada Jigjiga xagee lageeyey,yaase kamid ah dadkaa la xidhay?
Posted by ONA Admin	/ July 16, 2013
Inta aynaan u galin dulucda warka ku saabsan dadka la xidhay Todobaadyadan, war dag dag ah oo goor dhaweyd naga soo gaadhay Jigjiga ayaa ahaa in kooxo Hawaarin ah oo wada khamriyesan ay toori isla dhaceen Hotelka Centaral ee badhtamaha magalada Jigjiga ka soo hor jeedka Hall-ka Sayid Maxamad C. Xassan. Labo ayaa loola cararay isbitaalka, lamase garan karo khasaaraha kale ay isgaadhsiiyeen. Cabdi ilay ayaa kooxda Hawaarinta u fasaxay dhamaan mukhataraadka kuna abaal mariya mararka ay dagaalo galaaan sifo uu niyada oogu dhiso. Intaa waa warkii hadda nugu soo dhacay.
Labadii Todobaad ee Ugu dabeysay waxaa magalada jigjiga Xabsiyada loo Taxaabay Boqolaal Qof oo aan la garaneyn magacayadooda iyo tiradooda midna, maalin walbana waxaad maqlaysaa tiro cusub oo la leeyahay xabsiga ayaa loo taxaabay.
Yaa Kamid Ah dadakaas?
Waxaaa Kamid Ah laba gabdhoodoo uu dhalay Sargaal UN-ta Ka Tirsan oo ku xidhan Adis Abab Abdi Bakool. Waxaa kaloo ka mid ah dadka la xidhay;
1- ina Heeryo wasiirkii horee AIDS-KA
2- Abdirahaman Abdulahi
3- Afdeyl oo anan ina Aya hiisa Helin
6- Laba Gabdhood Oo Ay Kala Qabaan Heykal Iyo Ina Heeryo oo Ay Midi Fooltahay
Intaa Ayaanu Helay magacayada Da’dakan. Waxaa Jira 20Ruux oo laga soo xidhay Shalay Suuqa Dharka ama Taiwanka.
Sababta Loo Xidhay maxay tahay?
Dadkan ayaa kala ah siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo caaadi ah. Qaar waxaaa loogu yeedhay inay yihiin xubno ONLF. Qaara waxaa loogu yeedhay mucaarad ka soo horjeeda xukuumada Abdi Ilay.
Xagee Lageeyey dadkaa?
Waayadan dambe Ruuxii la xidho Lagama Dabo Tago, ruuxii ka daba taga waa lagu daraa. Waa sababta aanu u waynay magacayada oo dhameestiran. Waxaa Naloo sheegay in maxaabiistan la geeyey xero ciidan oo ku yaala Gidhibka ama biyo xidheenka magalada jigjiga. Wariyaha ONA ee Jigjiga Ayaa Loosheegay In Biyaha lagu ciqaabo dadka Xiliga dabe ee habeenka oo lagu hafiyo.
Nuur afgaab/ Addis ababa.
Shacabka ku nool Jigjiga ayaa aamusaya markaad dhahado imisaa la xidhay waxay kugu jaawabi waynu wada xidhanahaye Amus!
waa ka xumahay
aad iyo aad ayaan oogaxanuunsanaynaa waxayabaha kudhacaya shacabkayaga aan waxba galabsanin ee uu gumaysigu kutamashlaynayo naftooda qaaliga ah kana doorbiday hanti iyo maamul
Waarun Tod waadad dhibaan oo aan waxay kucabtaan iyo melaay ucaararan haaysan markaa waay maarka waagartod inaay dhahaan waan waada xidhanahaay ilahow unaxaariso maxabistu
Ciiqabo dhagarqabe c/ubo